Shiinaha 100% Suufka Casriga ah ee Jidhka Jidhka Dharka PY-YR007 iyo Soosaarka | Pinyang
100% Suufka Casriga ah ee Jir Jidhka Jirka ah PY-YR007
100% suuf moodada jirka ilmaha
1. Maxay yihiin faa'iidooyinka dharka cudbiga saafiga ah?
Sababtoo ah fiber-ka cudbigu waa kaariye liita kuleylka iyo korontada, isudheellitirka kuleylka kuleylka waa mid aad u hooseeya, iyo saboolnimadiisa iyo dabacsanaantiisa sare awgeed, qadar badan oo hawo ah ayaa lagu ururin karaa inta udhaxeysa fiilooyinka, hawaduna waa kaarire kuleyl liita iyo koronto. Sidaa darteed, dharka saafiga ah ee suufka saafiga ah waxay leeyihiin kuleyliyaha kuleylka wanaagsan, iyo xirashada dharka suufka saafiga ah wuxuu dadka ka dhigayaa inay diirimaad dareemaan 2 、 Sidee loo xirtaa funaanad?
Bax: T-shaati + koofiyad balaaran oo fidsan maxaa yeelay unugyada melanin ee maqaarka carruurta ma bislaadaan oo waxay leeyihiin iska caabin liidata fallaaraha ultraviolet, waxaa lagugula talinayaa inaad xirato funaanad dhaadheer ama shaati gacmo dheer ah marka aad baxeyso, taas oo aan ka hortagi karin oo keliya qoraxda, laakiin sidoo kale ilaali maqaarka jilicsan ee ilmaha.
Waxay sidoo kale u oggolaan kartaa cunugga inuu xirto hawo wanaagsan oo hawo ballaadhan oo ballaadhan, sidoo kale wuxuu ciyaari karaa saameyn wanaagsan oo qorrax-dhaca ah, laakiin sidoo kale wuu iska ilaalin karaa kulaylka.
2. Safarka garoonka: shaati gacmo-dheer + surwaal
Xilliga xagaaga, haddii waaliddiintu ay rabaan inay carruurtooda u kaxeeyaan dibedda dibadda, waxay ku qaadan doonaan waqti dheer bannaanka, waana sahlan tahay in qorraxdu gubato. Intaas waxaa sii dheer, kaneecada, qodaxda, bakteeriyada iyo wixii la mid ah ayaa khatar ku ah maqaarkooda. Markaa surwaal gacmo dheereeya u xidho carruurta, ma aha oo kaliya saamaynta wanaagsan ee hooska, laakiin sidoo kale si looga fogaado qaniinyada kaneecada, xoqitaanka qodaxda iyo xaaladaha kale.
Isticmaalka badeecada: dharka kooxda, habeynta shaqsiyeed, iwm, ayaa habeyn kara midabka, qaabka, astaanta.
--Maxaa naloo dooranayaa?
Noocyo kala duwan oo leh naqshad moodal iyo midabbo kala duwan si loo buuxiyo shuruudahaaga.
Tayada 2.High iyo adeegga ugu fiican.
Tirada yar waa la aqbali karaa.
5.Offer adeegga ku darista astaantaada.
--Waa maxay MOQ?
Wixii alaab kala duwan, dhar kala duwan, tirada gaarka ah waxay noqon doontaa kala duwanaansho, pl u soo bandhig iibiyahayaga shuruudahaaga, waxaan hubin doonaa MOQ-da adiga.
--Sidee lagu ogaadaa tayada badan?
Kahor soosaarka, waxaan kuu soo diri doonaa muunad PP, ka dib markaad xaqiijiso, ka dib waxaan bilaabi doonnaa badeecada inta ugu badan.
- Sidee ku saabsan xirxirida?
Waxaan iska saareynaa xirxirida bacaha PP haddii aadan shuruud u baahnayn, haddii aad rabto xirmo wanaagsan, pl noo soo sheeg, waxaan kugula talin doonnaa baakadaha ku habboon ama loo qaabeyn karo sidii naqshadeyntaada.
--Sidee loo geyn doonaa rarkeyga?
Waxaan ku rari karnaa badeecadaha xawaaraha, hawada, tareenka ama badda. Waxaan kuu soo bandhigi doonnaa habka ugu wanaagsan ee maraakiibta iyadoo loo eegayo tiradaada amarka.
Xiga: Xilliga Dayrta iyo Faashadda Jiilaalka Jiilaalka Jiilaalka Jiilaalka PY-YR005
Suudhka Gawaarida Gaaban ee Gaaban PY-YR006
Xilliga Dayrta iyo Faashadda Jiilaal Jiilaalka Jiilaalka Jirka ah
Jogging Dharka Gaaban ee Gacanta Gaaban PY-YR004
Suudka Diiran Kulaylka Ilmaha Fuulaya PY-YR001
Suuf 0-12 Bisha Ilmaha Jump Suit PY-YR010